प्रकाशित मिति ३ चैत्र २०७५, आईतवार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
बथान नै नष्ट गर्ने रोगबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । बर्ड फ्लुका कारण सर्वसाधारणहरू डराएका छन् । एक जनाको काभ्रेमा मृत्यु भएपछि झन् यो रोगका बारेमा धेरै…
नेपाली कलाकारलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध !
काठमाडौं । अमेरिका भासिनका लागि नेपाली कलाकारले नक्कली प्रमाणपत्रसहित ग्रिनकार्ड भिसा माग्ने गरेको खुलेको छ ।
नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका…
वडाध्यक्षद्वारा विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कारबाही गर्न माग
काठमडौं । वडाध्यक्षहरुले सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा अध्यक्ष…
चर्चित गुण्डा नाइके दीपक मनाङेबिरुद्द प्रहरीको सर्च अभियान, कहाँ लुकेका छन् मनाङे ?
काठमाडौं। चर्चित गुण्डा नाइके तथा प्रदेश ४ को मनाङबाट प्रदेशसभा निर्वाचित…
विभेदमा वादी महिला
वीरेन्द्रनगर । सुर्खेत गुर्भाकोटका पुतली वादी दाउरा बेचेर गुजरा चलाउँछिन् । कहिले उनी भारत गएर कमाएर ल्याउछिन् ।
गाउँलेले दुई झाँक्रीलाई कुटीकुटी मारे
धादिङ । उत्तरी धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका–२ लताबमा गाउँलेको कुटपिटबाट शनिवार विहान दुईजना झाँक्रीको मृत्यु भएको छ । झाँक्रीको काम…